Ummulisooyinka oo ku yar dhakhtarada waddanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ummulisooyinka oo ku yar dhakhtarada waddanka
La daabacay tisdag 17 maj 2016 kl 11.52
Kela Anhem: "Waa arrin jidhka dhan ku xanuujinaysa"
sawir: Michael Zamora/TT
Tirada ummulisooyin ee dhakhtarada waddanka ka shaqeeya ayaa hoos u dhacay, islamarkaas ayey sii adkaatay in shaqaale cusub laga shaqaaleeysiiyo. Mushkuladan ayaa sannakan soo korodhay marka loo barbardhigo sanadyadii ka horreeyay.
Khaasatan ayey mushkuladani sii kordhaysa xagaaga fooda inugu soo haya. Sidaas ayaa laga ogaaday baadhitaan ay l´aanta Ekot arrinkan ka sameeysay.
-Waan ka xumahay in maamulkeenu u shaqeeynayn sida aanu doonayno in u shaqeeyo, waa in gabadh kasta oo dhalaysa hesho caawimaadi ay u baahneeyd iyada oo aan loo eegin in ay maalintu castahay amba maalin caadi ah tahay, ayuu sheegay Jane Stegring oo fadhiya gudiga ururka abaabula shaqaalaha caafimaadka ee Vårdförbundet loo yaqaano.
13 ka mid ah 19 gobol ay Ekot wacday ayaa sheegay in xaalada cusbitaalada sugaysa xaqaaga soo socda ka darrantahay sanadyadii hore.
Sababta ugu weeyn ayaa ah in ay adaktahay in la helo ummulisooyin laga shaqaaleeysiiyo islamarkaas na ay yaryihiin ummulisooyinka ka shaqeeya cusbitaalada waddanka.
Baadhitaan uu ururka maamullada degmooyinka iyo gobollada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno SKL dhowaan sameeyay ayaa laga ogaaday in boqolkii ba 80 maamulada gobolada caafimaadka ku adaktahay in ay ummulisooyin ka shaqaaleeysiiyan.
Xaaladan ayaa si xun u saameeynaysa haweenka dhalaya oo ku khasban in ay u tagaan dhakhtar kale oo meel fog ku yaala.
Kela Anhem ayaa ka mid ah haweenka xagaagan dhalaya.
-In adiga oo dhalaya lugu jidhaahdo boos kuma hayno ee meel kale tag ayaa ah arrin jidhka dhan ku xanuujinaysa, ayey sheegtay.